Music Room [Freetalk]
Myanmar IT Resource Forum » FREE TALKING ZONE » » Free Talking » Music Room [Freetalk]
1 Music Room [Freetalk] on 22nd January 2010, 1:51 pm
ကျနော်တို့  ဒီဖိုရမ်က IT နဲ့ ပတ်သတ်ပေမယ့် အားလုံးလည်း Music ကို ကြိုက်ကြမှာပါ . အဲတော့ ဒီခေါင်းစဉ်အောက်ကနေ သီချင်းအကြောင်းတွေ
ပြောကြရအောင်ဗျာ .. :clap :clap
သယ်ရင်းတို့ ဘော်ဘော်တို့ရော ဘာသီချင်းတွေ နားထောင်ဖြစ်ကြလဲဗျ .. :rolleyes
ကျနော်တော့ ခုတလော Bunny Phyo သီချင်းတွေ ကိုနားထောင်ဖြစ်တယ် .. စာသားတွေက ကောင်းသလို အသံလည်း ကောင်းတယ်
နောက် ကိုသားကြီး နဲ့ ကို သိန်းလင်းစိုး သီချင်းတွေလည်း နားထောင်ဖြစ်တယ် R&B အမျိုးအစားလေ ကျနော့်အကြိုက်ပဲ ..
လိုချင်တာရှိလည်း ကျနော့်ဆီကတောင်းပါ .. ကျနော်က အမြဲလိုလို သီချင်းအသစ်တွေ ဒေါင်းဖြစ်တယ် .. အဲဒါကြောင့် ရှိခဲ့ ရင် တင်ပေးပါ့မယ် :smoking
အားလုံးပဲ ဆက်ဆွေးနွေးပေးကြပါဦး ..
2 Re: Music Room [Freetalk] on 25th January 2010, 7:31 pm
ဘယ်သူမှ ဆက်မဆွေးနွေးသေးပါလား...ကဲကဲ ကျွန်တော်လာပီ တား၂ လာပီ အခုတစ်လောတော့
ကနေ IDM နဲ့ MTV လေးတွေစုနေတယ်ဗျ...နားထောင်ဖြစ်တာတွေကတော့
Eng ကတော့ အဲ့ဒါလေးတွေပဲ Looping ပတ်ပြီးနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်...မြန်မာသီချင်းကတော့
Bunny Phyo ပဲနားထောင်ဖြစ်တယ်..တစ်ချို့ အပုဒ်တွေက ခံစားချက်တိုက်ဆိုင်လို့ပါ
3 Re: Music Room [Freetalk] on 25th January 2010, 8:00 pm
Eng သီချင်းတွေက အကိုမသိတော့ (ကိုယ်လည်း နားမလည်လို့ ) နားမထောင်ဖြစ်ဘူးကွ ..
ဟိ ဟိ တော်သေးတယ် ဆွေးနွေးမယ့်လူရှိလို့ ကျေးဇူး :attention
4 Re: Music Room [Freetalk] on 8th February 2010, 10:20 am
အခုတစ်လော တော့ ဟိုးရှေးခေတ်က သီချင်းတွေ ကို နားထောင်ဖြစ်နေတယ်...
ပြည်လှဖေတို့။ ကိုမြကြီးတို့.. ဟိဟိ သိပါ့မလားသိဘူး။
သူတို့ သီချင်းတွေလည်း နားထောင်လို့ကောင်းတယ်..
မြန်မာ့ရိုးရာမပျက်အောင်တော့ နားထောင်တယ်.. မြန်မာသီချင်တွေကို ကြိုက်လည်း ကြိုက်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေကတော့ နောက်ဆုံး Billboard top 10 သီချင်းတွေကိုတော့ အမြဲနားထောင် ဖြစ်တယ်...
လိုချင်ရင်လည်း request လုပ်လို့ရပါတယ်..
5 Re: Music Room [Freetalk] on 8th February 2010, 10:35 am
ဒါမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ ကျတော်လည်းရတာပေ့ါဗျ.... ကျနော်က တော့ အခုတလော နားထောင်ဖြစ်တာက Taylor Swift တို့ Miley Cyrus တို့ ကိုနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်... တခြားကတော့ စိတ်ကူးပေါက်ရင်ပေါက်သလိုပဲ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါကိုလိုက်ပြီး နားထောင်တဲ့သီချင်းက အစုံပါပဲဗျာ...
6 Re: Music Room [Freetalk] on 8th February 2010, 5:06 pm
bunny phyo ပဲ နားထောင်ဖြစ်တယ် ........... ခံစားချက်ကို တစ်ခါ ထဲ ထိသွားလို့
" ဟိုးတုန်းက နှစ်ခြိုက်ခဲ့တဲ့ မင်းနှုတ်ခမ်းပါးလေး လွမ်းတယ် "
7 Re: Music Room [Freetalk] on 8th February 2010, 6:26 pm
အစ်မရေ အစ်မက သီချင်းဟောင်းတွေပြန်နားထောင်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်သိချင်တာလေးမေးမလို့ပါ။
ကျွန်တော့် ကို ဂစ်တာသင်ပေးတဲ့ ဆရာနဲ့ ဆရာ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ပြောနေတာ ကိုကျွန်တော် နားစွန်နားဖျားကြားမိတာလေးပါ... သူတို့ပြောနေကြတာ တွံတေးသိန်းတန် သီချင်း တစ်ချို့လည်း Copy ပဲတဲ့ အဲ့ဒါ ဟုတ်လားဟင် ?
8 Re: Music Room [Freetalk] on 8th February 2010, 7:41 pm
ကျွန်တော်က အရင်တုန်းကတော့ သီချင်း နားထောင်တယ်။
Com ဖွင့်တာနဲ့ သီချင်းပါ ပွင့်အောင်လုပ်ထားတာ။ ရှင်းရော။
နောက်တော့ အိမ်က အသံကို နားမခံနိုင်လို့ ခဏခဏပြောတာနဲ့ ၊ နားထောင်ဖြစ်တော့ဘူး။
9 Re: Music Room [Freetalk] on 8th February 2010, 7:48 pm
zay wrote: bunny phyo ပဲ နားထောင်ဖြစ်တယ် ........... ခံစားချက်ကို တစ်ခါ ထဲ ထိသွားလို့
အကြိုက်ချင်း တူတဲ့လူ တွေ့ ပြီ ..
ဘာလဲဟ သီချင်းစာသားလား လိုချင်ရင် ငါ့မှာရှိတယ် ..
10 Re: Music Room [Freetalk] on 8th February 2010, 7:51 pm
ဟိုတစ်ခါတောင် သီချင်းတောင်းတာ စာသားပါရလာတယ်။
11 Re: Music Room [Freetalk] on 8th February 2010, 7:52 pm
ဟုတ်ဖူးဟုတ်ဖူး... ကိုzay က အဲ့ဒီ့ စာသားလေးဘာလို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာလေးကိုပေါ့
12 Re: Music Room [Freetalk] on 8th February 2010, 10:31 pm
သီရိ wrote: အခုတစ်လော တော့ ဟိုးရှေးခေတ်က သီချင်းတွေ ကို နားထောင်ဖြစ်နေတယ်...
အဟဲ .. ကျွန်တော်လည်း ခုတလောတော့ ဗညားဟန် နားထောင်ဖြစ်တယ် .. အစ်မ ပြောတဲ့ သူတွေလောက်တော့ ရှေးမကျဘူး ..ဟီးဟီး ..
အင်္ဂလိပ်သီချင်းကတော့ enrique iglesias ရဲ့ Maybe သီချင်းကိုပဲ နားထဲစွဲနေတယ် .. ဒါပေမယ့် ရတော့ ရ၀ူး .. ဟီးဟီါ်
13 Re: Music Room [Freetalk] on 9th February 2010, 1:00 pm
αℓт.332 wrote: ဟုတ်ဖူးဟုတ်ဖူး... ကိုzay က အဲ့ဒီ့ စာသားလေးဘာလို့ကြိုက်တယ်ဆိုတာလေးကိုပေါ့
လွမ်းနေလည်း ချစ်သူက ပြန်လာမှာ မှ မဟုတ်တာ
" တစ်ယောက် မကောင်း နောက်တစ်ယောက်ပြောင်း" ပေါ့ ဗျာ
ပြောလက်စ နဲ့ ကြော်ငြာဝင်ရမယ်
ကို ဇေ မှာ ချစ်သူမရှိပါ
14 Re: Music Room [Freetalk] on 9th February 2010, 2:57 pm
(ခလေး ၃ ယောက်နဲ့ မိန်းမပဲရှိတယ်)
ကျနော်တော့ ဟဲလေးရဲ့ ခိုနားရာ သီချင်းလေးကို နားထောင်ဖြစ်နေပါတယ်
15 Re: Music Room [Freetalk] on 9th February 2010, 6:40 pm
ဟိုက် အပီကို ကြွားကုန်ကြပြီ ကျွန်တော်လဲ ဘယ်နောက်ကျခံပါ့မလဲ alt.332 ချစ်သူလက်မဲ့... လာမည့် Feb 14 တွင် ၃ နှစ်ပြည့်မည်... အဘယ်သို့ ၃ နှစ်ပြည့်သနည်းဆိုတော့ Valentine မှာ ချစ်သူမရှိတာ ၃ နှစ်ပြည့် ဟီဟိ...
အဲ လော၂ ဆယ်တော့ နှလုံးသားရေးရာလှုပ်ရှားလိုက်တာ လက်လွန် ခြေလွန် မျက်လုံး ပါလွန်သွားလို့ ရှော့ ဖြစ်နေတယ် ဟီဟိ
16 Re: Music Room [Freetalk] on 11th February 2010, 1:17 pm
ဖတ်ရင်းဖတ်ရင်းနဲ့ ကြော်ငြာတွေ ရောက်ကုန်ပြီဟီဟီ
ှုဝင်ရူပ်တော့မယ် သီချင်းကတော့ Bunny Phyo ရဲ့ "အလွမ်းပြေ အနမ်း"အရမ်းကြိုက်တယ် repeat လုပ်ပြီးတော့ကို နားထောင်တယ် အဝေးရောက်နေတော့လဲ အဲ့ဒါလေးပဲ နားထောင်ပြီးဖြေရတာပေါ့ဗျာ :miss :luv
17 Re: Music Room [Freetalk] on 11th February 2010, 3:40 pm
ဟိုဟို လေ ထူးအိမ်သင်သီချင်းဆိုထားသမျှလိုချင်တယ်ဗျာ။ ကူညီကြပါလား။
18 Re: Music Room [Freetalk] on 12th February 2010, 7:09 am
ထူးအိမ်သင် သီချင်းတွေ အများကြီးတွေ့ တယ်
19 Re: Music Room [Freetalk] on 12th February 2010, 8:25 am
အကိုလည်း valatine day နဲ့ ပတ်သက်ပြီးပြောချင်တယ်။
အကိုက အခုမှ ရည်းစားရတာဆိုတော့ ဘာလက်ဆောင်ပေးရင် ကောင်းမလဲ။
20 Re: Music Room [Freetalk] on 12th February 2010, 12:26 pm
အနမ်းလေး တစ်ပွင့် ပေးစေဗျာ
ိပိုက်ပိုက် မကုန် တော့ ဘူးပေါ့
21 Re: Music Room [Freetalk] on 22nd February 2010, 2:20 pm
BUNNY PHYO ကို ကြိုက်သူများအတွက် သူ့ရဲ့ album တစ်ခုလုံးပဲ
22 Re: Music Room [Freetalk] on 24th February 2010, 8:55 pm
23 Re: Music Room [Freetalk] on 7th May 2010, 9:43 pm
MITR မှ ညီအကို များ စိတ် အပန်းပြေစေရာ သီချင်းလေး တစ်ပုဒ်တင်ပေးလိုက် ပါတယ်...
ကြိုက်မယ်လို့တော့ ထင် တယ်
နာမည်က coffee shop တဲ့
24 Re: Music Room [Freetalk] on 7th May 2010, 9:50 pm
Listening to the TayLOr Swift,TAyLOr Swift and TayLORSSS'!!!!!!!!!!!
Ever listening to HER song. And PLUS< now gonna listen to the JUSTin Bieber~~~ <3 Cool [You must be registered and logged in to see this image.]
25 Re: Music Room [Freetalk] on 7th May 2010, 10:35 pm
ခုကြိုက်နေတာကတော့ Breathless (အနော့် ချစ် ပြောပြလို့) နောက်တစ်ခုက Justin Bieber ရဲ့ BABY (အနော့် ညီမ ပြောပြလို့)
၂ ခုလုံးကို အချိန်ပြည့်ဖွင့်ထားတော့ အိမ်ကလူတွေတောင် အမြင်ကပ်လာတယ်။
26 Re: Music Room [Freetalk] on 8th May 2010, 6:33 pm
LOL.. Justin Bieber's BABY is also my BF's favorite. Uhh yeah, he prefers Bieber's ONE TIME!!!!
MIss him.. kwi kwi kwi
27 Re: Music Room [Freetalk] on 8th May 2010, 7:51 pm
ကျွန်တော်ကတော့ အပြင်းတွေကိုပိုအာသီသဖြစ်တယ်ဗျ .. ခုလောလောဆယ်တော့ Marilyn Manson ကိုအတော်ခိုက်နေပီ [You must be registered and logged in to see this image.] သူ့ ရဲ့MTV တွေကြည့်ရတာ ကျွတ်ဆင်ကြီးတွေဗျာ .. gothic ဆန်ဆန်တွေဂျီးပဲ ... နောက် Avenged Sevenfold လဲကြိုက်တယ် ဆိုတဲ့သူရော ဂစ်သမားရော အလန်းတီး/ဆို တာ. Static-x ရဲ့ Drum သမားကိုတော့ပိုသဘောကျတယ်ဗျာ .. အားရော မာန်ရောပါလို့[You must be registered and logged in to see this image.] creep, seether, Dream Theater, etc .... rock နွယ်တဲ့ဟာတွေကို ပိုသဘောကျတယ် ..rap ခပ်ပါးပါးလေးမှုန်းထားတဲ့ Limp Bizkit/linkin Park ကတော့ ချွှင်းချက် [You must be registered and logged in to see this image.]
28 Re: Music Room [Freetalk] on 9th May 2010, 2:09 pm
လွန်ခဲ့သော ၂ပါတ်ကျော်ကတော့ Jay Sean ရဲ့ Down Flash လေးတောင်လုပ်ကြည့်သေးတယ်... နောက်တော့ Keisha ရဲ့ Tik Tok...Breathless ကတော့ ကျွန်တော့်ဘော်ဒါ ကျော်ခိုင်ပြောလို့ နားထောင်ဖြစ်တယ်...Ne-Yo ရဲ့ Closer, 2NE1 ရဲ့ I don't care နဲ့ Fire, WonderGirl ရဲ့ Nobody. ကျန်တာတွေမေ့တောင်ကုန်ပီ
တစ်လက်စတည်း...MTV ကို Resolution လန်း၂ လေးတွေနဲ့ Down လို့ရတဲ့ site လေးပါ share လိုက်ဦးမယ်...သိပြီးတဲ့သူတွေကတော့ မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ပေးကြပါ...
29 Re: Music Room [Freetalk] on 23rd July 2010, 12:43 pm
ဟာဒီလို မျိုး Topic ဆိုရင်ကျွန်တော်လဲဝင်ပြီးဆွေးနွေးချင်တယ်ဗျာ။ ကျွန်တော်က Music နဲ့ ပတ်သက်ရင် တော်တော်လေး Crazy ဖြစ်တယ်။ အိမ်မှာဆိုအားနေရင် [You must be registered and logged in to see this image.] သီချင်းတွေပဲနားထောင်နေတာ။ ကြာတော့လဲအိမ်ကအမြင်ကတ်လာတာပေါ့။ ကျွန်တော်ကသီချင်းနားထောင်ရင် သီချင်းသိပ်မရွေးဘူးဗျာ့။
R&B, Pop, Rock, Alter, Punk အကုန်လုံးလိုလိုနားထောင်တယ်။ ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ်တော့ အင်္ဂလိပ်သီချင်းတွေတော်တော်များများနားထောင်ဖြစ်တယ်။ အခုနားထောင်ဖြစ်တဲ့ သီချင်းTitleတွေကတော့
Justin Bieber & Sean Kingston ရဲ့Eenie Meenie, Justin Bieber ရဲ့Baby, Favorite Girl,
Jay Sean ရဲ့Down, We are the world 25(Various Vocalists), Linkin Park ရဲ့New Divide ပြီးတော့ Taylor Swift ရဲ့ Love Story နဲ့You Belong With Me တို့ ကိုနားထောင်ဖြစ်တယ်။ အဲဒီသီချင်းတွေ ကိုကြိုက်လွန်းလို့ Selection သတ်သတ်လုပ်ပြီးတော့ကိုနားထောင်တာဗျာ့။
30 Re: Music Room [Freetalk]